I-chalet ethandekayo yeentaba zaseTarnita
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguStefan
Le yipropati ekhethekileyo kunxweme lwechibi iTarnita, iikhilomitha ezingama-30 ngaphandle kweCluj-Napoca kwiNtshona yeCarpathians. I-chalet yamkela iintsapho ezinabantwana okanye iqela labahlobo ukuba baphumle, babe ne-barbecue, baqubhe, bahambe okanye benze ukhenketho lwebhayisekile ukujikeleza iinduli.
Le ndlu yentaba yokwenyani ibekwe kwindawo yentaba eyi-1100 m² enendawo ebanzi yamanzi. Umgangatho osezantsi ovulekileyo unekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye netafile enkulu yokutyela (enokuthi ibekwe kwindawo ephangaleleyo ye-25 m² terrace) kwaye ibamba igumbi lokuhlala elinesofa esongwayo kunye nezitulo ezibini. Izinyuko ezijikelezayo zikhokelela kwigumbi lokulala elinebhedi enkulu, oomatrasi ababini (abantwana okanye iindwendwe ezongezelelweyo) kunye neefestile ezinkulu zombono omhle wechibi. Izinyathelo ezilishumi ukusuka kwi-cottage, kukho indlu encinci yokuhlambela kunye nendlu yangasese.
4.76 · Izimvo eziyi-129
Ipropathi ifumaneka ekupheleni kwempelaveki yabucala, ecaleni kwechibi, ke yindawo ezolileyo. Iinduli ezinemithi ezijikelezileyo (ezinye zingaphezulu kwe-1000 m ukuphakama) zilungele ukukhwela intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile entabeni (singakulayishela iingoma ezininzi kwi-GPS yakho), iilali zeentaba zemveli zifikeleleka. Nge-kayak unokuhlola lonke ichibi, iindawo zokuqubha zifumaneka kwiindawo ezininzi. Ukuba ihlobo liyimvula, sinokukucebisa iindawo ezininzi zokukhangela amakhowa. Xa unyukela kwelinye icala leLucaci Rock umhlaba uyavuleka kwaye ungonwabela iimbono ezintle echibini, iCluj kunye neenduli eziphakamileyo zeMarisel.
Ivenkile ekufutshane ikumgama oziikhilomitha ezili-10 ezantsi entlanjeni e-Somesul Rece.
Iilwimi: English, Français, Deutsch, Magyar, Português, Español